सेयर बजारमा विकृत खेलोफड्को : दोष कसको ? | Ratopati
‘बजारको जिम्मा हाम्रो होइन’ : केन्द्रीय बैङ्क, ‘हाम्रो नियन्त्रणमा छैन’ : नेप्से
personप्रयास श्रेष्ठ exploreकाठमाडौं access_timeभदौ २४, २०७८ chat_bubble_outline0
‘नियामक निकाय राष्ट्र बैङ्कले कुनै एक क्षेत्रलाई हेरेर निर्णय गर्ने वा नीति बनाउने काम गर्दैन, समग्र वित्तीय क्षेत्रलाई नै हेरेर बनाउँछ । यसमा कसले के भन्छ र के गर्छ, हाम्रो सरोकारको विषय भएन । तर, यसैलाई लिएर राष्ट्र बैङ्कले लिएको समग्र अर्थ नीतिलाई दोष दिनुको कुनै तुक छैन । सेयर बजारको जिम्मा हामी लिन सक्दैनौँ,’ राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले रातोपाटीसँग भने ।
त्यसो त गत साउन २९ गते शुक्रबार केन्द्रीय बैङ्कले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेलगत्तै साउन ३१ गते खुलेको बजारमा अधिकतम २४.५७ अङ्कको गिरावट आएको थियो । अघिल्लो दिन अर्थात् मौद्रिक नीति आउनु पूर्वमात्र ३१ सय ७९ बिन्दुमा रहेको बजार चौथो दिनमै ३१ सय ५४ बिन्दुमा झर्न पुग्यो । नेप्सेमा यो गिरावट अहिले पनि जारी छ । बुधबार अर्थात् भदौ २३ गतेसम्म नेप्से परिसूचक २७७.७५ बिन्दुले घटिसकेको छ । यस्तै अवस्था अझै रहिरहे बजार पुनः बियरिस (घट्दो क्रममा) जाने खतरा बढेको आम लगानीकर्ताहरूले बताउन थालेका छन् ।
लगानीको सिलिङ तोक्नु गलत : लगानीकर्ता
के भन्छ नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड ?
‘अहिले धितोपत्र बजारमा के भइरहेको छ, त्यो अध्ययनकै विषय छ । के भइरहेको छ र के ले गर्दा बजार यसरी घटिरहेको छ, हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ । बोर्डले हालैमात्र सानो अध्ययन समिति बनाएको छ । समितिको प्रतिवेदन आएपछि के भएको हो, भन्न सकिन्छ । तर, अहिले नै यसै भएको भन्न सकिने अवस्था छैन,’ गिरीले रातोपाटीसँग भने ।
मौद्रिक नीतिकै कारण सेयर बजारमा पहिरो गएको हो त ?
हल्लामा टिकेको बजार
अघिल्लो दिन अर्थमन्त्री–गभर्नर टेलिफोन संवादलाई बजार बढाउने अस्त्र बनाएकाहरू भोलिपल्ट भने पुँजीबजारमा जम्न सकेनन् । बुधबार त नेप्से परिसूचक ६०.२ अङ्कले घटेर २८७६.५९ अङ्कमा आइपुगेको छ ।
यस्तो भएपछि लगानीकर्ताहरू फेरि केन्द्रीय बैङ्कतर्फ नै आक्रामक भएका छन् । कारण हो बैङ्कका प्रवक्ताले केन्द्रीय बैङ्कले ल्याएको नयाँ नीति कम्तीमा सो चौमासिकसम्म संशोधन हुन नसक्ने जानकारी दिनु । प्रवक्ता ढकालले मौद्रिक नीति तत्काल संशोधन हुन नसक्ने जानकारी सोमबारै दिएका थिए ।
यसरी, ठुला लगानीकर्ताले गर्ने हल्ला र चलखेलमा फसेका साना लगानीकर्ताहरू अहिले पुँजीबजारमा गुमाउने अवस्थामा पुगेका छन् । उनीहरूले आफ्ना हकमा खासै प्रभावकारी नहुने सेयर धितो कर्जासम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर केन्द्रीय बैङ्कमाथि आक्रोश पोखिरहेका छन् । ठुला लगानीकर्ताहरूले चाहिँ कर्जा सीमा अन्त्य गरी पूँजी आफ्नो हातमा लिएर बजारमा चलखेल गर्न साना लगानीकर्तालाई मोहरा बनाउन खोजिरहेका छन् ।